Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ na Beljọm Ụmụaka nwetakịrị akụkọ nke mbụ na-akọ akụkọ akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha "Origi".
Anyị Divock Origi igimụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a metụtara ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere agba ọkụ ya na ntụgharị ya dị ka onye na-eti ihe. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Divock Origi's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Divock Origi nke Childhoodmụaka-Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na Divock Okot Origi a mụrụ na 18th ụbọchị nke April 1995 na Ostend na Belgium. Ọ bụ nke abụọ n'ime ụmụ atọ a mụrụ ya, Linda Adhiambo na nna ya, bụ Mike Origi.
Ndị nne na nna bụ Origi bụ ndị na-ahụ maka ọdịmma egwuregwu nke Kenya bụ ndị kpọbatara ya n'ụwa n'oge nna ya na-egwuri egwu maka ndị ọkachamara KV Oostende na Belgian pro otu.
Ya mere, a zụlitere Origi na obodo Belgian dị nso na Houthalen-Oost ebe o toro na nwanne ya nwanyị nke okenye bụ Natasha na nwanne nwanyị nke obere Deneen.
Mgbe ị na-etolite na Houthalen-Oost, mba Belgium na Kenya nke agbụrụ ojii nwere mgbọrọgwụ Kenyan-Luo, gosipụtara na ọ bụ apụl na-esighi n'ebe dị anya na osisi ahụ site n'igosipụta ihe ndị na-eme egwuregwu bọọlụ.
"Mgbochi ụlọ abanyewo n'ụlọ ahụ ozugbo ọ malitere ije ije. Ọ na-agbakarị ha n'ụlọ na n'ogige. "
Chetara Mike na nwa ya nwoke nwere mmasị na football.
Akụkọ nke Divock Origi - illọ ọrụ:
N'oge na-adịghị anya tupu e debanye aha egwuregwu football na usoro ndị ntorobịa nke otu òtù ndị omeiwu Belgian, KFC De Zwaluw Wiemesmeer mgbe ọ bụ agadi 5.
"… Site na mgbe ọ dị afọ isii, o nweelarị onyinye ma toro ogologo ma sie ike karịa ụmụaka ndị ọzọ."
Ihe ngosi Mike nke na-eto eto Origi.
Ndị na-eto eto football na-eto eto na-aga n'ihu hụrụ Origi ka ọ gaa na ndị Belgium, KRC Harelbeke na KRC Genk mgbe nna ya nwere ọkachamara ọkachamara. Ọ bụ na usoro ndị ntorobịa nke KRC Genk na Origi dere nnukwu ntụrụndụ na football na agụmakwụkwọ na Park Houthalen Primary School na Sint-Jan Berchmans College.
"Mgbe akụkọ ụlọ akwụkwọ ya ga-abịa, a ga m ahụ ihe ndị nkuzi kwuru na ọ dị mma na bọọlụ yana ọ kacha mma n'etiti ndị ọgbọ ya".
Divock Origi Biography Eziokwu - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Ọ dị mma ịmara na Origi nwere ọtụtụ ọrụ ntorobịa ya na KRC Genk ebe ọ zụrụ azụ maka afọ 9 tupu ọ kwaga Lille na France dị nso na afọ 15. Mgbe ọ nọ na Lille, Origi mere ihe ngosi dị egwu nke mere ka ndị nleta anya Liverpool.
Ndị Bekee ekwesịghị inwe nkwenye ọzọ na Origi ga-enye ha ezigbo ego maka ego ha mgbe ha lere ya na ọ zigara Belgium mba otu aka na knockout nke 2014 World Cup site na-emetụta ihe mgbaru ọsọ ụwa mbụ ya na mmeri 87th nkeji 1-0 Russia.
O mechara nye ya akwụkwọ nke isii afọ site na Bekee na 29th nke July 2014 maka ego 10 Million pound ma nyeghachi ya ozugbo na Lille maka inwekwu ahụmahụ na ndị otu.
Divock Origi Bio - Bilie Iji Maara Aha:
Origi nwetara ahụmahụ dị ezigbo mkpa nke na-egwuri egwu maka Lille n'oge ego ọ na-agba na oge 2014-2015. N'ikpeazụ, ọ sonyeere Liverpool na oge na - esote mgbe o mechara 44 mkpuchi ma tinye nchịkọta 9 maka Lille.
Origi mere Liverpool ka ọ bụrụ onye na-anọchite anya ya na Manchester United. N'oge na-adịghị anya, ọ meriri ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka asọmpi maka Liverpool site n'ịdọpụ ihe mgbaru ọsọ na mmeri 6-1 na Liverpool na Southampton.
Divock Origi mmekọrịta mmekọrịta:
Enweghi ndekọ banyere mmekọrịta gara aga nke Origi ma ọ bụ akụkọ gbasara mkpakọrịta nwoke na nwanyị. Onweghi njikọ ndị enwere na mmekọrịta ya ugbu a. Nke a na-egosi n'eziokwu na ọganihu na-echegbu onwe ya banyere iwere ọrụ ya n'ọtụtụ dị elu.
N'agbanyeghị nke ahụ, Origi nwere ihe ọ chọrọ iji mee ka enyi nwoke ma ọ bụ di mara mma nye àgwà nke ịdọ aka ná ntị ma lekwasị anya na ọ na-eweta egwuregwu nke bọlbụ.
Divock Origi Ezinụlọ:
A mụrụ Origo Origo n'ime ezinụlọ na-ahụ egwuregwu. Anyị na-ewetara gị nkọwa zuru oke gbasara ezinụlọ ya na ezinụlọ ya.
Banyere nna Origi:
Mike Okoth Origi bụ nna nke ihu. A mụrụ ya na 16th nke Nọvemba 1967 na Nairobi na Kenya. N'adịghị ka nwa ya nwoke, Mike malitere dị ka onye na-eche nche nke gbanwere Striker maka Shabana na Kenya Super League. O mechara kwaga na klọb ndị Belgium, KV Oostende na 1992 na 3 afọ mgbe e mesịrị, nabatara ọmụmụ nke nwa nwoke mbụ ya na nwa ya nke abụọ Divock.
N'ịbụ onye a kwenyere na ọ bụ onye mbụ na Kenya na-egwu egwuregwu na Europe, Mike bụ nna na onye nkuzi nye nwa ya nwoke nke nwere mmasị na ya maka ezi ofufe ya na football.
"Mgbe m bụ nwa m, achọpụtara m na papa m nwere ọtụtụ ịdọ aka ná ntị na football mgbe ị na-enye ihe nile n'egwuregwu ahụ, egwuregwu ahụ ga-enyeghachi ihe ọ bụla."
Divock kwuru banyere àgwà nna ya.
Young Divock na nna ya Mike.
Nna na nwa nwoke na-enwe mmekọrịta chiri anya na Mike na-akwado nkwado dị iche iche n'ọtụtụ n'ime egwuregwu Divock iji mee ka obi ụtọ ya.
Banyere nne Origi:
Linda Adhiambo bụ nne Origi. Dị ka di ya, Linda dị nso na nwa nwoke ọ mụrụ naanị ya bụ onye ndị dike na ezi omume mere ka ọ pụta ìhè n'etiti ndị nne na Kenya na Belgium.
Banyere ụmụnne nne Origi:
Siblingsmụ nwanne Origi gụnyere Natasha na Deneen. Natasha bụ ọkpara nke ụmụnne. O tolitere na Origi bụ onye ya na ya nwere egwuregwu football. O nwekwara nwa nwanyi - Maliya bu nwa nwanne Origi. N'aka nke ọzọ, Deneen bụ nwanne nwanyị nke obere Origi na otu n'ime ndị ọkacha mmasị ya.
Aka ekpe-aka ekpe: nna nna Divock Mike, nwanne nwanyị nke ntà - Deneen, nwanne nwanyị nke okenye -Natasha na ada Maliya, nne Divock Linda na Divock.
Banyere Origi's Relations:
Site na mmekorita nke Origi bu ndi nna nna ya Austin, Gerald na Anthony ndi gbara bọọlụ di iche iche. Divock nwekwara nwanne nwanne Arnold Origi nke na-egwu egwuregwu bọọlụ dịka onye na-eche nche maka Lillestrom na Kenya.
Divock Origi Eziokwu:
Divock bụ onye ọkpụkpọ mbụ nke mba Kenyan ka ọ bụrụ akara na mmemme World Cup.
A mụrụ nwa dolphin “Origi” na Boudewijn Seapark na Bruges. Mmepe ahụ bịara mgbe ihe mgbaru ọsọ nke 88th nke naanị Divock zigara ndị otu mba Belgium na usoro nke knockout nke 2014 World Cup, na mmeri 1-0 Russia. Ọ dị nwute na Dolphin adịghị ndụ ogologo oge dịka a kọrọ na ọ nwụrụ ụbọchị ole na ole.
Ndụ Divock Origi nke Onwe:
Origick Origo bụ ndị obodo Kenya na Belgium na-ahụ n'anya ma na-anọchite anya onye mbụ na ihe omume ụwa. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-akwado ndị Kenyia site n'ịgwa Swahili okwu na-atọ ụtọ.
Ọ na-ekwukwa Flemish, asụsụ ọ mụtara ka ọ na-etolite na Ostend ma nwee ezigbo ntụziaka nke Dutch. Divock hụrụ ezinụlọ n'anya, football na nwere mmasị na nkà mmụta mmekọrịta mmadụ na ụmụ mmadụ, karịsịa ọrụ ike nke ụbụrụ mmadụ nakwa otú o si emetụta àgwà dị iche iche.
Ndụ Divock Origi:
A na-ekwu na ịgba akwụkwọ a nwere ụlọ nke ruru $ 1 Million na Belgium. Nchịkọta ụgbọala ya na-egosipụta ụdị dị ka Audi, Ford yana Obere Cooper nke ọ na-eme ka ọ bụrụ ọzụzụ.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụ akwụkwọ Divock Origi nke nwata Akụkọ nke gbasara eziokwu efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.